October, 2018 | Otu Di na Nwunye
October 29, 2018 + England, Europe, Nhazi njem, United Kingdom
October 27, 2018 + Ozi ndị a, Enyemaka mmadụ, Ịmụ asụsụ, Ime Ego
Uru 5 nke ịbụ onye nkuzi na-eme njem na-agagharị
Ihe Nlekọta 5 nke Ịbụ Onye Na-eme njem Na-agagharị Na Jason, onye kere DigiNo. DigiNo gbalịrị ime ka ndị nkụzi online na-ebi ndụ na paradaịs. N'ime afọ ole na ole gara aga, ọganihu nke nkà na ụzụ hụrụ ịgbachapu ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'akụkụ nile nke ndụ emewo ka mgbanwe dị mma na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mpaghara a nile. N'okwu metụtara agụmakwụkwọ, ọ dịghị otu obi abụọ na e nweela mgbanwe dị ukwuu ... GỤKWUO
October 20, 2018 + Florida, North America, Transportation, Nhazi njem, United States
Ụzọ kachasị mma isi mee njem site na Fort Lauderdale Iji Miami
Enwere otutu uzo iji si na Fort Lauderdale gaa Miami, na nke ozo. Ọ bụghị naanị maka ndị obodo na-achọ ịga n'etiti obodo ndị ahụ, mana ndị njem na-abịa South Florida na-achọkarị ụzọ dị ala, ngwa ngwa, na dị mfe ịhụ obodo abụọ ahụ, na-enwe ike ịga site na Fort Lauderdale na Miami niile dị mkpa. Dabere na ihe mere ị nọ na South ... GỤKWUO